कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर चालिसेको कमाउ धन्दा रोकिएन,किर्ते कागज बनाएर क्रसर संचालनको लागी स्विकृत पत्र - Gokarna News from Nepal
"मेयरको धन्दामा जिससकै मिलिमतोको आशंका''
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचत गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेका एकपछि अर्का काण्डहरु पर्दाफास हुँदै जान थालेका छन् । बालुवाखानी अवैध रुपमा संचालन गर्न स्वीकृत दिने देखी जथाभावी प्लटिङ कित्ताकाट सिफारिस दिने कामहरु मेयर सन्तोष चालिसेले गर्दै आएका प्रमाणहरु भेटिएका छन् । गोकर्ण न्यूजलाई प्राप्त प्रमाणहरुमा मेयर चालिसेले अख्तियारी दुरुपयोग गर्दै किर्ते कागज बनाएरै अवैध रुपमा ह्यगृव भैरब वालुवा तथा ढुङ्गा खानी प्राली लाई अनुमती पत्र दिएको भेटिएको हो । मेयरले दिएको उक्त पत्र नगरपालिका प्रशासनको कुनै फाँटमा भेटिएको छैन ।
यस अवैध स्विकृतको लागी मेयर चालिसे र नगरपालिका इन्जीनियर अजय बाँनियाको मिलिमतो देखिन्छ । मेयर चालिसेले किर्ते गरेर दिएको पत्रमा भनिएको छ ‘गोनपा वडा ३ को संधियार सहमती तथा सर्जमीन सहितको सिफारिस पत्र तथा इन्जीनियर अजय बानियाँको स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा गोनपाको ३ को टोठाडोलमा खानी संचालन तथा वालुवा प्रशोधन गर्न अनुमती दिएको छ । यसबारे इन्जनियिर अजय बाँनियाले आफुँले कुनै प्रतिवेदन नदिएको यस अधि बताइसकेका छन् । बाँनियाले भनेका छन् ‘मैले संधियार सहमती तथा सर्जमीन पत्रहरु हेरेको हुँ तर उपयुक्त छ भनेर प्रतिवेदन मैले दिएको छैन । मरो नाम राखेर मेयर सापले कसरी लेख्नुभयो म यसबारे आफै अनविज्ञ छु । किन लेखियो मेरो नाम ? के प्रतिवेदन दिएर लेख्नुभयो मेयरसापले मलाई थाहा छैन ।’
ह्यगृव भैरब प्राली दर्ता गर्दा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र प्रवन्ध पत्रमा उक्त वालुवा उद्योग नुवाकोटको ओखरपौवा गाविस वडा १ मा संचालन गर्ने भन्दै दर्ता गरेको छ,भने काठमाडौं महानगरपालिका वडा ३१ शंखमुलमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहने व्यहोरा उल्लेख छ । तर गोकर्णेश्वर नगपालिकाका मेयरको तोकमा सो कम्पनी धमाधम गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा ३ मा संचालन भइरहेको छ ।
ऐन नियम कानुन मिच्दै मेयर चालिसेले सो पत्र दिएको भेटिएको हो । उनले दिएको स्विकृत पत्र नगपालिकाको कुनै पनि शाखामा समेत नभेटिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अग्नीप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने ‘मेरो मातहत र प्रशासन फाँटबाट सो कम्पनी संचालनको लागी पत्र दिएको छैन तर मेयरसापले कसरी दिनुभयो,त्यो मलाई जानकारी छैन । उहाँ (मेयर)ले दिएको त्यो स्वीकृत पत्र नगपालिकाको कुनै पनि शाखामा छैन ।’
यता यसबारे मेयर सन्तोष चालिसेलाई सोध्दा मेरो पछि किन मिडिया लागेको भन्दै प्रश्न पो गरे ? गोकर्ण न्यूजले तपाईका राम्रा कामको सम्मान स्वरुप कलम चलाइरहेको र नराम्रा र अवैध कार्यमा प्रश्न सोध्दा पछि लागेको भन्ने उत्तर तपाई जनप्रतिनिधिले दिन मिल्छ ? तपाईले दिएको पत्र नगरपालिका छैन ? के आधारमा नुवाकोट संचालन हुने भनेर स्विकृत पाएको कम्पनी तपाईको तोकमा कसरी गोनपा ३ मा संचालन भयो , के यसरी सिधै रकमको चलखेलमा प्रशासन,नगरसभालाई गुमराहमा राखेर गोजीबाट पत्र बनाएर अवैध रुपमा संचालन दिन मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो समयमा को सचिव हुनुहन्थ्यो, उहाँहरुले सिफारिस दिएर कम्पनी स्थानान्तरण भएर दिएको हुँला भन्दै तर्कीए । तर उक्त उधोगको नत कुनै स्थानान्तरण भएको पत्र छ,नत वडा कार्यालयमै दर्ता भएको छ ।
किन नगरपालिकाको कुनै फाँटमा तपाईले दिएको पत्र छैनन नी भन्ने प्रश्नमा किन नहुनु त्यही होला, गएर माग्नुस भन्ने उनको उत्तर आयो तर नगरपालिका प्रशासकिय अधिकृत अग्नीप्रसाद अधिकारीले मेयरसापले स्विकृतको लागी दिएको पत्र प्रशासनको कुनै फाँटमा नभएको भन्दै लिखित जवाफनै दिएका छन । मेयर चालिसेसँग यसबारे कुरा भईरहँदा आफुँ कार्यक्रममा भएको भन्दै फोन काटे । पुनः फोन गर्दा फोन उठ्न सकेन ।
शाखा अधिकृत भिमबहादुर शाहीद्धारा हस्ताक्षरित पत्र जहाँ मेयरले दिएको स्वीकृत पत्र नभएको व्यहोरा उल्लेख छ । तथापी यस पत्रमा
समेत चलाखी पूर्वक कम्पनी र उधोगको नाम नराखी प्राविधिक प्रतिवेदन पत्र भनेर उल्लेख गरिएको छ । जहाँ माग पत्र मेयर चालिसेले दिएको पत्रको बारे भनेर विवरण मागिएको थियो ।
शाखा अधिकृत भिमबहादुर शाहीद्धारा हस्ताक्षरित पत्र हेर्नुहोस्
नगरपालिका भित्र हुने र भए गरेका विभिन्न उद्योग , कम्पनी संचालन गर्न नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाइएको हुन्छ । त्यही समितिले इन्जीनियर र वडाले ठिक भएको प्रतिवदेन दिएको खण्डमा उपमेयरनै स्वयम स्थलगत अनुगमनमा पुगेर सो प्रतिवेदनलाई मुर्त रुप दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर यहाँको सवालमा भने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर शान्ती नेपालले यसबारे आफुलाई थाहै नभएको यसअघिनै बताई सकेकी छन् । उनले भनिन् ‘मलाई खानी संचालन गराउन , वा कम्पनी , उद्योग संचालन गर्नको लागी कुनै पत्र वा जानकारी आएको छैन । म के का आधारमा अनुगमनमा जानु । मेरो उपस्थितीमा त्यस्ता वालुवा खानी संचालनको लागी कुनै अनुगमन र स्विकृत दिने काम म बाट भएको छैन । त्यस्तो अन्य ठाउँमा कम्पनी दर्ता भएर यहाँ आएर संचालन गरेको छ, भने त्यो खारेज हुन्छ,हाम्रो क्षेत्राधिकार भनेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्र हो । नुवाकोट र कामनपा ३१ मा रहेका कम्पनी उद्योगको होइन । त्यसरी झुठ्ठा विवरण पेश गरेका संचालकलाई समेत कारवाही हुन्छ । त्यस्ता कार्य रोकिन्छन ।’
मेयरको धन्दामा जिससकै मिलिमतोको आशंका
त्यस्तै अवैध रुपमा बालुवा खानी संचालन देखी अवैध प्लटिङ गर्न दिने मेयर सन्तोष चालिसेको कार्यमा साथ दिदै काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिका केही प्रतिनिधिनै रकमको चलखेलमा लागेको समेत आशंका गरिएको छ । मेयर चालिसेलेको यस कदमका बारे गोकर्ण न्यूजबाट समाचार प्रकाशन भएपछि जिससको टोली र नगरपालिका मेयर सहितको टिम बिच केही दिन अघि संयुक्त बैठक भएको हो ।
समितिले गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्र भएका अवैध र अव्यवस्थीत प्लटिङको जनगुनासो बढेपछि जिल्ला समन्वय समिति नगपालिकामा आएर बैठक गरेको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य उद्धव भण्डारीले जानकारी दिए । उनले नगरपालिकालाई जग्गा र प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्य सम्पादन गर्न एक महिनाको सयम दिएको बताए । उनले भने ‘नगरपालिकालाई कार्यविधि बनाएर जग्गा सम्माउने लगाएतका कार्यमा स्विकृत दिने लगाएतका निर्णय भएका छन ।
भण्डारी सोही नगरपालिका भित्रका बासिन्दा हुन । अवैध रुपमा जग्गालाई सिफारिस दिने मेयर चालिसेका कदमबारे विभिन्न संचार माध्यममा समाचार छाइरहदा भण्डारी बेखवर भने पक्का थिएनन् । तर उनले मेयर चालिसेका कदमबारे जानकार नभएको बताउँदै आएका छन् ।
नगरपालिका भित्रैका वासिन्दा त्यसमाथि जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य समेत रहेका भण्डारी यस्ता संम्वेदनशिल बिषयमा जानकार हुँदैनन भने जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनताको काम गर्छु भन्नु कहाँसम्मको लाजमर्दो कुरा होला?
भण्डारीकै पहलमा जिससको टिम नगरपालिका छिरेको थियो । यती धेरै जग्गा धमाधम प्लटिङ भइराख्ने तर जिसस नगरपालिका भित्र छिरेर कोठे बैठकमा समिति रहँदै जाने हो भने भुमाफियाको जालो झन बढ्ने देखिन्छ । प्रमुख चालिसेले धमाधम प्लटिङ गर्न स्वीकृत दिएका तथ्य र प्रमाण छन् तर जिसस भन्छ् ‘कार्यविधि बनाउँन भनेका छौं । यसरी हेर्दा कार्यविधिनै नबनाई मेयरले गैर कानुनी ढङ्गबाट दिने स्विकृतबारे भने जिससका प्रतिनिधि मौन बस्छन ।
एक स्थानिय भन्छन् जिससको टोली आउँछन कार्यविधि बनाउन भन्दै निर्णय गर्छन,कोठे बैठक गर्छन जान्छन् । मेयरसापको काम भने चलिराखेकै हुन्छ । ‘यस कार्यमा जिससका केही प्रतिनिधिनै रकमको चलखेलमा लागेका छन ।’
मेयरको अवैध कार्यमा जिससका केही प्रतिनिधिले साथ दिएका छन् । वन डिभिजिन कार्यालयले पनि वफर जोन एरिया परेको भन्दै डोजर नचलाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको उप्पर अहिले पनि डोजर धमाधम चलिरहेकै छ । ’उनले भने ‘जिसस फिल्डमा गएर अनुगमन गर्नेकी नगरपालिकामा गएर कोठे बैठक गरेर निस्कने ? यसले के देखाउँछ भने समितिकै मिलीमतोमा मयेरका अवैध कार्य अगाडी बढेका छन् ।
यसरी जनताको आँखामा छारो हाल्ने लाखौं रकमको चलखेलमा अवैध कामलाई नै नगरपालिका प्रमुखलेनै वैधता दिन किर्तै कागजनै खडा गर्नुले कानुन विधि र नियमको उंलधन मात्र भएको छैन यसले सिधै भष्ट्रचारमा लिप्त छन् स्थानिय सरकार संचालन कर्ता हरु भन्ने देखाएन र ? यसैगरी जनप्रतिनिधि र मेयरको नाममा किर्ते कागज बनाउँदै जाने र केही अमुख व्यत्तिले लाखौं रकम कुल्याउने धन्दामा सम्बन्धीत निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।